Chelmo - ထက်မြတ်တဲ့ ဇနီး နဲ့ လိမ်ညာတဲ့ ခင်ပွန်းသည်
ထက်မြတ်တဲ့ ဇနီး နဲ့ လိမ်ညာတဲ့ ခင်ပွန်းသည်
ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူ၊ ဇနီးသည်ကို လိမ်ညာတော့မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုကို လျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းကို ဒီဆောင်းပါးလေးက ပညာပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်မှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသားက သူ့ဇနီးသည်ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
ခင်ပွန်းသည်---- " မိန်းမရေ..ကိုယ်တော့ သူဌေးနဲ့ အတူ China မှာ ငါးမျှားဖို့ တစ်ပတ်ကြာလောက် လိုက်သွားပေးရမယ်။ ကို့အတွက် promotion ရဖို့အခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုလို့လည်း ဆိုပါတော့ကွာ။ တစ်ပါတ်စာ အဝတ်အစား၊ ငါးမျှားတံနဲ့ ငါးမျှားသေတ္တာကိုပါ စီစဉ်ထားပေးပါ။ ရုံးကနေတစ်ခါထဲသွားမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို အိမ်လှည့်ဝင်လာပြီးယူလိုက်မယ်။ အော်...ဒါနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အပြာရောင်ပိုဲးထည်ညအိပ်ဝတ်အသစ်လေးလဲထည့်ထားလိုက်ဦး။ "
သူ့ရဲ့ဇနီးသည်က ဒါဟာတော်တော်လေး မသင်္ကာဖွယ်ရာပဲလို့ ထင်မိပေမဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းပီသစွာနဲ့ပဲ ခင်ပွန်းသည်ပြောတဲ့အတိုင်း သသွေမသိမ်း စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ပါတ်ကြာလို့ အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌန်က အနည်းငယ်ပင်ပန်းနေသရောင် ဖြစ်နေပေမဲ့လည်း ကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို နွေးထွေးစွာပဲ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဇနီးသည် ---- "ငါးတွေအများကြီး ဖမ်းမိခဲ့လား?"
ခင်ပွန်းသည် ---- "ဟုတ်တယ် မိန်းမရေ..ကိုယ်တို့ဖမ်းမိခဲ့တာ နဲနဲနောနော မဟုတ်ဘူးကွ၊ ဆာမွန်ငါး၊ ငါးပါးဟပ်၊ ဓားရှည်နှုတ်သီးငါး စုံနေတာပါပဲကွာ၊ ဒါနဲ့....မင်းကိုမေးရဦးမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့အပြာရောင်ညအိပ်ပိုးထည်ဝမ်းဆက်ကို ဘာလို့ထည့်မပေးလိုက်လဲ ?
ကဲ...စာဖတ်ပရိသတ်တို့ရော...အမျိုးသမီးလေးက ဘယ်လိုဖြေလိုက်မယ်ထင်လဲ...? သူမဖြေတဲ့အဖြေလေးကို အားလုံးလဲ သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဇနီးသည် ---- "ကျွန်မ ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။အဲဒီညအိပ်ဝတ်စုံက ရှင့်ရဲ့ငါးမျှားသေတ္တာထဲမှာ.."
ဒီ article လေးကို ဖတ်ပြီး နှစ်သတ်တယ် ဆိုရင် သူငယ်ချင်း၊မိသားစုတွေကို share ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။ သမီးရည်းစား၊ လင်မယား အချင်းချင်းလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ကင်းဝေးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့သူနဲ့ ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။